यसरी जितौं साथीको मन ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यसरी जितौं साथीको मन !
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७५, बिहीबार २०:१७ लेखक नेपाली जनता
आम मानिस आआफ्नो पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई लिएर सधै सचेत हुने गरेको पाइन्छ । बढ्दो आधुनिकीकरणसंगै सम्बन्धमा पनि अनेक उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । तर समस्या जहाँ हुन्छ त्यहाँ समाधानका अनेकन उपायहरु पनि हुन्छन् । आफ्नो पार्टनरलाई सधै खुशी राख्न र आफूप्रति आकर्षित बनाइराख्न विज्ञहरुले केही सुझाव सुझाएका छन् ।
संसार भरिको सबै मानिसलाई सुगन्धित बास्नाले आर्कषित गरेको हुन्छ नै । सुगन्धित बास्ना र आर्कषणको संयोजनले पार्टनरबिचको सम्बन्धलाई धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ आफ्नो पार्टनरलाई मनपर्ने बास्नादार अत्तर,परफ्युमको प्रयोगले प्रेम र आर्कषण कायम रहने तथ्य शोधले पत्ता लगाएको छ । त्यस्तै पार्टनरलाई मनपर्ने बास्नादार फूलले बेडरुम सजाउदा पनि पार्टनरबिचमा रोमाञ्चकता तथा आकर्षण कायम भइरहने विज्ञहरुको दाबी छ ।
हप्तामा एकपटक आ–आफ्नो पार्टनरको मनपर्ने श्रृङगार र ड्रेसअपमा प्रस्तुत हुन सकिन्छ । सधैं एउटै ड्रेसअपमा भन्दा स्टाइलिस ड्रेस र हेयर स्टाइलमा सजिन सकिन्छ । तर स्टाइलस भन्दैमा असुहाउदो रुपमा प्रस्तुत हुदा आलोचित होइन्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
केही न केही नसोचेको कुरामा पार्टनरलाई सरप्राईज दिनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । जस्तो कार्यालय समयमा लन्चको समय हुँदा पुगेरसंगै लञ्चको अफर गर्दा छुटै मज्जा महसुस हुन्छ । समय मिलाएर छुट्टीको दिन फिल्म,सपिङ,डिनरको लागि जाने गनुपर्छ । निजी सवारी छ भने समय समयमा लङ ड्राइभमा जानुहोस् । साथै एक अर्कालाई पर्याप्त समय दिएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ जसले हप्ताभरिको कामको थकानलाई भुलाएर सम्बन्धमा अझ मिठास ल्याइदिन्छ ।
आफूलाई फिट राख्नुहोस्
शारीरिक बनोट पार्टनरबिच आर्कषणको एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिएको छ । तसर्थ तपाई स्वयमलाई फिट रहन जरुरी छ । स्वस्थ खानपानले तपाईलाई आन्तरिक रुपबाट तपाईको सांचलाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउँदछ । त्यस्तै शारीरिका ब्यायामले तपाईको बाहिरी सुन्दरता बढाउन मद्दत गर्दछ । तसर्थ मन र तनबाट तपाई स्वस्थ र फिट रहन जरुरी छ ।
कुराकानीको शैलीमा ध्यान दिनुहोस्
शोधका अनुसार कुराकानीमा निपुर्ण महिला वा पुरुष एकअर्काप्रति छिटो आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले आफ्नो कुराकानीको शैलीलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । कुराकानी गर्दा नकरात्मक असर पुर्याउने खालको कुरा गरे तपाईको छबिलाई नराम्रो प्रभाव पर्दछ । यदि तपाइको पार्टनर कुनै किसिमको तनावमा छ भने उसको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् । हरेक किसिमको समस्यामा तपाई आफ्नो पार्टनरको साथमा संगै हुनुहुन्छ भन्ने भरोसा दिलाउनुहोस् ।
पार्टनरबिचको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कडी विश्वास नै हो । जसलाई हरेको सम्बन्धको मेरुदण्ड पनि भन्दा अत्युक्ति नहोला । सा–साना कुरामा शंका गरेमा सम्बन्धमा फाटो आउँछ तसर्थ केही कुरामा चित्त नबुझे एक अर्कामा कुराहरु सेयर गर्नु पार्टनरको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । केही सानो कुराले गलत बुझाई पार्टनरमा नपरोस् भनेर सचेत भए पार्टनरबिचको प्रेमसम्बन्ध संधै प्रेमिल बन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
त्रिवि स्नातकोत्तर शिक्षा संकायमा पनि छैनन् विद्यार्थी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मानविकी संकायमा विद्याथी घटिरहेका वेला शिक्षा संकायको हविगत पनि उही छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सेमेस्टर…
मन्त्री, सभामुख र अध्यक्षकै टेलिफोन काटियो
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षको ल्यान्ड लाइन फोन नम्बर ०१-४२००१५९ डायल गर्दा ‘तपार्इंले डायल गरेको नम्बरको आगमन…
काठमाडौं । गायक एवम् सर्जक प्रकाश शपुतले अर्का संगीतकार, गायक एवम् सर्जक शम्भु राईको गीतको अशं चोरी गरेको पुष्टि…
तपाईं पनि जङ्गबहादुरको घोडा किन्ने कि ?
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत रुपमा मनाइँदैछ ।
भक्तपुरबाट सातजना जुवाडे पक्राउ
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–५ कमेरोटारबाट जुवातास खेल्दै गरेका सातजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बालकुमारी वन नजिकै तीनतले घरमा डेरा…
नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज पूर्वराजाले लगेको सरकारको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तरगत रहेको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ ले केही समय पहिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बोलाएर…